Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် အပ်စမ်းသပ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေး ထုတ်လုပ်သူနှင့် အပ်စမ်းသပ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေး ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
ခုနှစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကျနော်တို့ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်များမှာ Taiwan အပ်စမ်းသပ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေး ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ ကျနော်တို့အတွေ့အကြုံတွေနှစ်အတွင်းကောင်းမှုတန်းပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သည့်ခံကြရသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ prompt ကိုပေးအပ်ခြင်းအာမခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခိုင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်တည်ငြိမ်တဲ့တိုးတက်မှုအပေါ်မှီခိုအားထားလွန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့ရေရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။
တည်ငြိမ်တဲ့အချိန်နှင့်တပြေးညီထောက်ပံ့ရေး, ယုတ္တိရှိအရည်အသွေးနှင့်စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ဝန်ဆောင်မှု, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အာမခံ
ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပနှစ်ဈေးကွက်တွင်ကောင်းကောင်းမရောင်း။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစိတ်ဝင်စားကြ, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကြိုက်အမိန့်နေရာလိုပါက t ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်တွန့်ဆုတ် ?? ဝတ်ဆင်ဖတ်ရှုပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
ဘီရီလီယမ်သည်ကြေးနီမဟုတ်ပါ-သံလိုက်,မဟုတ်-မြင့်မားသော sparking-အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သတ္တုလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူအစွမ်းသတ္တိကိုပစ္စည်း,ပုံစံနှင့်အခြားဂုဏ်သတ္တိများ.၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးချခြင်းများစွာရှိသည်,တူရိယာ,တိကျတိုင်းတာခြင်း devices များ,ခဲယမ်းမီးကျောက်နှင့်အာကာသ.
ဘီရီလီယမ်ကြေးနီဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဝါယာကြိုးများသည်ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိနိုင်သည်,ထိုကဲ့သို့သောပတ်ပတ်လည်အဖြစ်,စတုရန်း,ပြားချပ်ချပ်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်,နှင့် reels အပေါ်အနာနိုင်ပါတယ်,ချဉ်,သို့မဟုတ်ဖြောင့်မျဉ်းကြောင်းအတွက်တင်ပြခဲ့သည်.
ဖြည့်စွက်ကာ,ဘီရီလီယမ်သည်ကြေးနီကိုတိုက်စားခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါ-အက်ဆစ်ဓာတ်(ထိုကဲ့သို့သော Hydrochloric acid ကိုအဖြစ်,ကာဗွန်အက်စစ်),ပလပ်စတစ်ပြိုကွဲထုတ်ကုန်ခုခံ,ပွန်းပဲ့ခြင်းနှင့်ပွန်းပဲ့.ထို့အပြင်,ဘီရီလီယမ်ကိုကြေးနီအပူ ပေး၍ ကုသနိုင်သည်,ထိုကဲ့သို့သောအသက်အရွယ်ခိုင်မာခြင်းနှင့် tempering အဖြစ်,၎င်း၏အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးတက်စေရန်,ကြာရှည်ခံမှုနှင့်စီးကူးခြင်း.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.probe-needles.com/my/needle-test-probes.html
အပ်စမ်းသပ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေး ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုစျေး ၀ ယ်ပါ။ အပ်စမ်းသပ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေး ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ချိသူ အပ်စမ်းသပ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေး ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan
Tungsten သည်ဘိလပ်မြေ carbide tungsten carbide ၏အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်သည်.၎င်းသည်ခိုင်မာသောမာကျောမှုရှိပြီးများသောအားဖြင့်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းကဲ့သို့သောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်ကြာရှည်ခံသတ္တုအဖြစ်အသုံးပြုသည်.Tungsten သည်အပူချိန်မြင့်မားသောသတ္တုပစ္စည်းများဖြစ်သည်.tungsten တစ်ဝါယာကြိုးသို့ရေးဆွဲနိုင်ပါတယ်ကတည်းက-ပုံသဏ္likeာန်လိုပဲ,tungsten ကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုပြီး electrodes အဖြစ်မကြာခဏအသုံးပြုကြသည်,ထိုကဲ့သို့သောနန်းကြိုးအမျှင်လေးများအဖြစ်,လျှပ်ကူးပစ္စည်း,thermocouples သို့မဟုတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးဆေးထိုးအပ်,စသည်တို့.,သို့သော် tungsten ကိုယ်နှိုက်ကတည်ငြိမ်ခြင်းနှင့်ပလပ်စတစ်နိမ့်ခြင်းပြproblemနာသည်အသုံးပြုစဉ်အတွင်း၎င်း၏သက်တမ်းကိုများစွာလျော့ကျစေသည်.ဖြည့်စွက်ကာ,အလွန်ခက်ခဲပြီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းပစ္စည်းအဖြစ်,tungsten ကိုမကြာခဏအမြင့်သို့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်-သိပ်သည်းဆနှင့်မြင့်မားသော-ထိုကဲ့သို့သောသံချပ်ကာယာဉ်များအဖြစ်မာကျော applications များ,လေကြောင်းမြင့်အပူချိန်,အပူနစ်မြုပ်,ပင် ballast နှင့်တန်ပြန်.ရီနီယမ်-tungsten probe သည်ရီနီယမ်ဖြင့်ပြုလုပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုရည်ညွှန်းသည်-3 ပါဝင်သော tungsten သတ္တုစပ်ဝါယာကြိုး%ရီနီယမ်.Chinatungsten Online သည်မြင့်မားသည်-rhenium အရည်အသွေး-tungsten စုံစမ်းစစ်ဆေးထုတ်ကုန်.
P7-ပယ်လေဒီယမ်အလွိုင်းစစ်ဆေးသည့်အပ်များသည်ရေတွင်းတစ်တွင်းဖြစ်သည်-ဒေါင်လိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့် Cobra စုံစမ်းကဒ်များအတွက်အသုံးပြုသောပယ်လေဒီယမ်အလွိုင်း.P7-ပယ်လေဒီယမ်သည်မာကျောသောကြောင့်မျက်နှာပြင်အနေဖြင့်အသုံးပြုခြင်းသည်ကြာရှည်ခံမှုနှင့် ၀ တ်ဆင်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်.အဆိုပါ porosity ဟာပန်းကန်ထဲသို့ထိုးဖောက်ဖို့ချေးကိုရပ်တန့်ခြင်းဖြင့်အခြေခံပစ္စည်းကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်.P7 ၏အပူအကြောင်း-ပယ်လေဒီယမ်အလွိုင်းစစ်ဆေးမှုအပ်,မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ထိတွေ့နိုင်သည်,အဆက်အသွယ်ခုခံအချိန်ကျော်တသမတ်တည်းရှိနေမည်.နိမ့်သောပွတ်တိုက်အားကိန်းအနိမ့်အနိမ့်အကျိုးရှိမှုကြောင့်ပလိုဂင့်လှုပ်ရှားမှုကိုပိုမိုချောမွေ့စေသည်။.P7-ပယ်လေဒီယမ်အလွိုင်းအပ်အပ်အပ်တွင်မြင့်မားသောသတ္တုစပ်မျက်နှာပြင်ရှိပြီးစက်မှုဖိအားများအောက်တွင်အက်ကွဲရန်နည်းပါးသည်.မဟုတ်ရင်,စုံစမ်းစစ်ဆေးတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်အားလုံးပစ္စည်းများကနေ,P7-ပယ်လေဒီယမ်အလွိုင်းစစ်ဆေးမှုအပ်၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ဒြပ်ပေါင်းများပျံ့နှံ့မှုသည်သေးငယ်သောဘောဇဉ်အရွယ်အစားနှင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေနည်းသည်.
အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်စုံစမ်းစစ်ဆေးကဒ်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်,အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းနှင့်စမ်းသပ်သူအကြား interface ကိုများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်,ဒါကြောင့်ဘုတ်အဖွဲ့ကိုအမှန်တကယ်စစ်ဆေးဖို့စစ်ဆေးနိုင်တယ်.စုံစမ်းစစ်ဆေးသုံးပါ:၎င်းသည် Probe Card ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးချိတ်ဆက်ထားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုသည်.သီးခြားစမ်းသပ်မှုများကိုမြင့်မားစွာခွဲခြားရန်ချစ်ပ်၏ pads များသို့လျှပ်စစ်အချက်ပြခြင်းများပို့ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်-ချွတ်ယွင်းထုတ်ကုန်များမှအရည်အသွေးထုတ်ကုန်. ပစ္စည်း:Tungsten(WNP),ရီနီယမ်အဖြိုက်နက်(WRNP),P4,P7,ဘီစီ သတ်မှတ်ချက်များကိုဖောက်သည်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည် စိတ်ကြိုက်ထုတ်လုပ်မှုဖောက်သည်ပုံဆွဲခြင်းနှင့်နမူနာအရသိရသည်လုပ်နိုင်ပါတယ် တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေးနှင့်အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့ မူရင်းထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ:အမေရိကန် ပြုပြင်ရာအရပ်:ထိုင်ဝမ်